Akụkọ - Usoro polymerization ọhụrụ a mepere ụzọ maka mkpuchi antifouling dị irè karị
Nchịkọta nke microorganisms dị n'elu bụ ihe ịma aka maka ụgbọ mmiri na ụlọ ọrụ biomedical ..Sfọdụ mkpuchi mkpuchi mmerụ polymer na-ata mbibi oxidative na mmiri mmiri, na-eme ka ha ghara ịrụ ọrụ oge na-aga. (Mp irighiri ihe ndị na-ezighị ezi ma na-akwụ ụgwọ na ụgbụ ụgwọ) nke efu) ihe mkpuchi polymer, nke yiri kapeeti nwere agbụ polymer, dọtara uche dị ka ihe ndị ọzọ nwere ike ịnweta, mana ugbu a ga-etolite na gburugburu ebe obibi na-enweghị mmiri ma ọ bụ ikuku ọ bụla.
Otu otu nke Satyasan Karjana duziri na A * STAR Institute of Chemical and Engineering Sciences achọpụtala otu esi akwadebe ihe mkpuchi polymer na mmiri, ọnọdụ ime ụlọ na ikuku, nke ga-enyere ha aka iji n'ọtụtụ buru ibu.
Jana kọwara, sị: "Ọ bụ nchọpụta na-enweghị atụ, ndị otu ya na-achọ ịme mkpuchi polymer amphoteric site na iji usoro eji eme ihe nke a na-akpọ atọgharị mbuba polymerization, mgbe ha chọpụtara na mmeghachi omume ụfọdụ ewepụtaghị ngwaahịa achọrọ. njedebe nke ihe eji eme polymer dị ka njikọta na mkpali eji eme ihe na mmeghachi omume. ”Ọ ga-ewe oge na ọtụtụ usoro iji kọwaa ihe omimi [etu o si rute ebe ahụ],” ka Jana na-akọwa.
Ihe nyocha nke kinetic, spectroscopy magnetic resonance spectroscopy (NMR) na nyocha ndi ozo na-egosi na amine na-ebido polymerization site na usoro anion.The polymerizations a na-akpọ anionic anaghị eguzogide mmiri, methanol, ma ọ bụ ikuku, mana ndị polymer nke Jana toro n'ihu mmadụ atọ ahụ, na-eduga ndị otu ahụ inwe obi abụọ banyere nchọpụta ha. Ha tụgharịrị gaa na ụdị kọmputa iji hụ ihe na-eme.
O kwuru, sị, "Njupụta arụmọrụ tiori ngosiputa chọrọ anionic polymerization usoro," Ọ bụ nke a bụ ihe atụ mbụ nke anionic ngwọta polymerization nke ethylene monomers na aqueous ajụ n'okpuru ihere aerobic ọnọdụ. "
Ndị otu ya ejirila usoro a mee ihe iji mepụta mkpuchi polymer sitere na monomers anọ amphoteric na ọtụtụ ndị bidoro anionic, ụfọdụ n'ime ha abụghị amines. ”N'ọdịnihu, anyị ga-eji usoro a mepụta polymer na-eguzogide ọgwụ na nnukwu ala. iji usoro ịgba agba ma ọ bụ impregnation, "Jana na-ekwu. Ha na-ezubekwa ịmụ ihe mgbochi mgbochi nke mkpuchi ahụ na ngwa Marine na biomedical.